पानीको कुरो पछि गरौं !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
पानीको कुरो पछि गरौं !
हाम्रा जिम्मेवार नीति निर्माता र निर्णयकर्तालाई तरकारीमा हरियो साग, भान्छामा जारको पानी र कार्यालयमा बोतलको पानी उपलब्ध भएसम्म गाउँमा सुक्खा लागेर बाँसको झ्याङसमेत सुकेको कुरा पछि गर्दा के फरक पर्छ र ?
माघ १२, २०७५ मधुकर उपाध्या
काठमाडौँ — एउटी ज्येष्ठ नागरिकलाई कागती बेच्दैथे हाम्रा दाइ । एउटै कागतीको १० रुपैयाँ भन्दा ती आमाले आश्चर्य व्यक्ति गरिन, ‘के हो, किन यति महङ्गो ? अलि धेरै लिँदा त सस्तो हुन्छ होला नि ?’
दाइले आफ्नै पारामा जवाफ दिए– नेपाली कागती आएन यो वर्ष, अनि के गर्नु, मेरै २०० रुपैयाँ केजी पर्‍यो । कसरी सस्तोमा दिनु ?
बाटो छेउ ठेलामा तरकारीको खुद्रा व्यापार गर्छन्, खोटाङ हलेसीबाट काठमाडौं झरेका राई थरका यी दाइ । एक बिहान कागती किन्न आएकी एक आमासित संवाद गर्दै थिए उनी । उनको हरेक दिन ग्राहकसँंग तरकारी भाउ ५/१० रुपैयाँ मोलमोलाइ गर्दैमा बित्छ । उनकोमै तरकारी किन्न पुगेको मलाई यस वर्ष नेपाली कागती किन आएन भन्ने जान्न इच्छा भयो । सोधेंँ– के भो दाइ, यसपाली र नेपाली कागती आएन ?
‘सबै बोट नै सुक्या छ त अनि के फलोस्,’ उनले भने । किन बोट सुक्यो ?
भदौदेखि पानी आ छैन । हिउँद डङ्गै सुख्खा छ । कागती मात्र हो र बाँसधरी सुक्यो, यसपाली हाम्रोमा (खोटाङस्थित आफ्नो गाउँको कुरो गर्दैथे उनी) । मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ– बाँसै सुक्यो रे ? ‘अनि त ? घाँस बुटो केही बाँकी छैन । यसपाली हिउँदे खेतीमा हातै हाल्नु पाएन,’ उनी चिन्तित देखिए । मेरो खसखस झन् जाग्यो– हैन यसैपाली कसरी सुक्यो बाँस, पोहोर–परारदेखि सुक्दै गा थियो कि ?
‘अलिअलि सुख्खा त भएको हो, पोहोर पनि । तर बाँस त हरियै थियो । यसपाली त ढोड सुक्याजस्तै सुक्यो ।’ उनी मेरो जवाफ दिँदै, आफ्ना ग्राहकलाई पालुङ्गोको भाउ पनि बताउँदै थिए । उनको ठेलाभरि हरियो पालुङ्गो र कलकलाउँदो रायोका साग थिए । हरियो लसुन, हरियो प्याज र गान्टे पनि टन्नै थिए । हिउँदका यी तरकारी काठमाडौंको विशेषतै हुन् । त्यसमा पनि दाइको मिठो व्यवहार । तरकारी किन्ने ग्राहकको कमी हँुदैन ।म आफैले बोकेर लगेको झोलामा तरकारी हाल्दै थिएँ । वातावरणप्रति सचेत अन्य धेरैजस्तो म पनि तरकारी किन्न सकभर आफ्नै झोला लैजान्छु अचेल । प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्न ।
मेरो जिज्ञासा बाँकी थियो । बिहान–बिहानै उनको व्यापारमा तगारो बन्नु ठिक हुन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि केही नसोधी रहन सकिन । अझै सोध्ने निधो गरेर एकछिन कुर्न छेउमा उभिएँ । उनी ग्राहकले किनेको पालुङ्गो प्लाष्टिकको झोलामा हाल्दै मेरो प्रश्नको जवाफ पनि दिँदै थिए ।
अनि मान्छे के खाएर बाँच्या छन् त ? ‘के हुनु नि, मैलै यहाँबाट भरथेग गर्‍या छु । एकजना दाइलाई घरको रेखदेख गर, कमाइ भए खाउ भनेर यता आइयो, पहिले त ठिकै थियो । यसपाली त विजोगै छ । त्यसै छोड्नु न आफू गएर बस्नु ?’ अनि तपाईको यो सानो व्यापारले आफू खाने कि, कोठा भाडा तिर्ने कि, उता गाउँको दाइलाई भरथेग गर्ने ? ‘अब नगरी सुख भयो त ?’ उनले बाध्यता बताए । उनी फेरि अर्काे ग्राहकसित रायोको सागको भाउ बताउँदै थिए । ग्राहक मुठामा ५ रुपैयाँ कम गर्ने प्रयास गर्दै थिए ।
मैले सोचँे– नेपालको कुनै ठाउँमा पानी नभएर बाँससमेत सुक्ने अवस्था छ । खेती भएको छैन । यता किसानले साह्रै मिहेनत गरेर फलाएको हरियो साग खान पाउनु नै अहो भाग्य भन्नुपर्ने बेलामा मुठामा ५ रुपैयाँ बढी लियो कि भन्ने चिन्ता छ ।
दाइ गाउँको कुरो सुनाउन उत्साहित भए जस्तो लाग्यो । म एकछिन अझै पर्खें ।
‘बाख्रा छाड्ने ठाउँ पनि भएन सबै सुकेर,’ उनले भने, ‘त्यसै छाड्यो, गटङटङ कुदेर खोलातिर जान्छन्, अनि अलिअलि भाको घाँसको ठुटो खान्छन् । त्यतिले पुग्दैन । जरै उखेलेर खान्छन् ।’ उनी आफ्नो कुरामा जोड दिँदै मलाई गाउँको वर्तमान हालत सम्झाउन खोज्छन्, ‘हैन पानी नै छैन त कसरी होस् ?’
उता साग किन्ने ग्राहकले सागको मोलमोलाइमा हाम्रो गन्थन तगारो ठाने । भने, ‘लल पानीको कुरो पछि गर्नाेस्, मलाई हतार भैसक्यो ।’ सागको भाउमा ५ रुपैयाँ घटाएर हाम्रा दाइ ग्राहकलाई पैसा फिर्ता गर्न ५/१० को दोब्रिएका नोट मिलाउन लागे ।
म भने नयाँ ज्ञानका लागि दाइलाई मनमनै धन्यवाद दिँदै हिँडेँ ।
साग किन्ने ती ग्राहकको ‘पानीको कुरो पछि गर्नाेस्’ ले मलाई एउटा कुरो प्रस्ट भए जस्तो लाग्यो । जे धेरै समयदेखि स्पष्ट हुनसकेको थिएन ।
पानी विज्ञहरूले पानीको महत्त्व र यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने कुरो गर्न थाल्या दशकौं भयो । ठाउँ–ठाउँका मूलमा पानी घटेको समाचार आउन थाल्या पनि १०/ १२ वर्ष भइसक्यो । र पनि समस्या सुध्रिनुभन्दा गहिरिँदो छ, किन ? मलाई यो कुरा अलि प्रस्ट भयो । मुठामा ५ रुपैयाँ घटाएर दिनदिनै मनग्य हरियो साग किन्न पाएसम्म पानी अभावले हुने दु:ख कसरी महसुस होस् ? हाम्रा नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, निर्णयकर्ता, जिम्मेवार पदाधिकारी सबैलाई तरकारीमा हरियो साग, भान्छामा जारको पानी र कार्यालयमा पिउन बोतलको पानी उपलव्ध भएसम्म खोटाङका राई दाइको गाउँमा वर्षाैंदेखि बढ्दै गएको पानी अभावले कागतीको बोट र बाँसको झ्याङसमेत सुकेको कुरा अलि पछि गर्दा के फरक पर्छ र ?
मूल सुकेका खबर केही वर्षयता छापामा आइराखेकै छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ वर्षअघि गरेको सर्भेक्षणमा समेत पहाडमा प्रश्न सोधिएका मध्ये ७४ प्रतिशतले पानी घटेको भन्या रहेछन् । मध्य पहाडका ४८ प्रतिशतले पानीको मूल पुरै सुक्या गुनासो गर्‍या रहेछन् । पानी अभावबारे यति जानकारी आइसकेपछि पनि बाँससमेत सुक्नेगरी पानी अभाव हुनु अगावै आवश्क कदम चाल्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जानकारी पर्याप्त हुनुपर्ने हो ।
खानेपानीलाई मात्र पानीको समस्याका रूपमा बुझ्ने हाम्रो सोचले पहाडका गह्रा/पाटा सुक्नुलाई चासोको विषय ठानेन । घरायसी प्रयोगका लागि खोलाको पानी पम्प गरी गर्जाे टारिएको छ । तर पानी संकट यति गहिरिसकेछ कि माटोको चिस्यानमा हुने पानीसमेत हराएर कागती र बाँस सुकेछन् । कागती बाहिरबाट आयात गरी प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा उपलव्ध हुन्जेल, पानीको कुरो अहिले गर्नु हतारो नहोला । चिन्ताको विषय, कतै बाँस पनि आयात गर्नुपर्ने दिन आउन थाल्या हो कि ? बाँस सुक्नु पानीको संकट निकै गहिरिएको संकेत हो ।
उखानै छ– भोको भन्छ डाँडावारि खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडापारि खाउँ । अब त मानिसमात्र हैन, जमिन पनि भोकाएको छ, पानीको लागि । डाँडावारि नै खान चाहन्छ । अहिले नीति निर्माणको तहमा भएको पुस्ताले पानीको महत्त्व बुझ्नसकेको भए वा त्यस अनुरुप कदम चालिदिएको भए, बाँस सुक्ने थिएन ।
पानी सुकेका स्थानका स्थानीय सरकारहरूले पानी जगेर्ना गर्न केही काम गर्न थालेका छन् । खोटाङकै केही क्षेत्रमा पानी रिचार्ज गर्न पोखरी बनाइएका समाचार आएका छन् । उत्साहप्रद र खुसीलाग्दा खबर । तर वार्षिक बजेटमा पैसा राखेर २,४ पोखरी बनाउने समय घड्किसकेको छ । १० वर्ष अगाडि भए हुन्थ्यो । अब हुन्न ।
अब पोखरीलाई नयाँ पुस्ताको अभियानका रूपमा अगाडि लानुपर्छ । जसमा युवाहरू स्वयंसेवीका रूपमा सहभागी होउन् । अबको २० वर्षपछिका जिम्मेवार नागरिक आज कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी हुन् ।
स्वीडेनकी किशोरी ग्रेटा थनबर्गले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विश्वलाई चकित पार्दै पचासाँै हजार युवा परिचालित हुने जुन अभियानको अगुवाइ गरिन्, त्यसले युवा पुस्ताको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता देखाउँछ । नयाँ पुस्तालाई पानीको जोगाड गर्ने कुरामा आजै अभिप्रेरित गर्न कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत पुस्तालाई घचघच्याउने बेला भइसक्यो । सहभागितामूलक स्वयंसेवी कार्यले मात्र हामीलाई समस्यासँग जोड्न मद्दत गर्छ । त्यो दिगो हुन्छ । अन्यथा आगामी दिनमा पानीको अवस्था महाकठिन हुनेछ भन्न अब साइत हेर्नु पर्दैन । प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२५
रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल र चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आश्चर्यको विषय हो ।
माघ १२, २०७५ चेतनाथ आचार्य
काठमाडौँ — कार्यकाल सकेर चीन फर्कनु अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको बिदाइ भेटमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले वैशाखदेखि चीन सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिइन् ।
त्यससँगै चीनले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिरहेको बन्दरगाह निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समाचारले नेपालीलाई खुसी बनायो ।
भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रका हजारौँ मानिस अलपत्र बनेका थिए । वैशाखदेखि नाका खोल्ने समाचारले ऊर्जा थपे पनि मितेरी पुलदेखि नेपालपट्टिको अरनिको राजमार्गको अवस्थाले पनि चिन्ता जगाएको छ । चीनले आफ्नो क्षेत्रमा धमाधम निर्माण काम गरिरहे पनि नेपालको तयारी छैन । हरेक चिनियाँ नेतालाई तातोपानी नाका खोल्नुपर्छ भन्ने अनि चीनले समयसीमा तोकेरै तयारी गरिरहँदा नेपालले आफ्नो क्षेत्रको सडक सुधार कहिले गर्ने हो, कुनै आँकलन छैन ।
रातारात पहाड छेडेर सुरुङ निकाल्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, चन्द्रमा नक्कली बनाउने क्षमता राख्ने चीनका लागि तातोपानी नाका खुलाउन चार वर्ष लाग्नु आश्चर्यको विषय थियो । किन बन्द भयो त यो नाका ? चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको अरनिको राजमार्ग २०२३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यही यही मार्गकै कारण चीनले ल्हासादेखि खासासम्मको ८०६ किलोमिटर लामो राजमार्गको नाम चीन–नेपाल मैत्री राजमार्ग राखेको छ । बन्द समाजमा रहेको चीनलाई पाँच दशक अगाडि अरनिको राजमार्गले नै दक्षिण एसियामा प्रवेश गराएको थियो । यो राजमार्ग नेपाल र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा द‍ह्रो कडीका रूपमा छ । भारत र पश्चिमा मुलुकको दबाब सहँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग बनाउन चीनसँग सहमति गरेका थिए ।
त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ झाँगिएको छ । तर केही नेपाली नेताका स्वार्थ र गलत कार्यले चीनलाई झस्का दिने काम पनि गर्न थाल्यो । बहुदल आएपछि नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री जर्जफर्नान्डिज अनधिकृत रूपमा तातोपानी नाकाबाट चीनको भूभागमा छिरे । २०५६ सालमा सत्रौँ कर्मापा लामा तिब्बतबाट भागेर नेपाल हुँदै भारत पुगे । यी काममा पक्कै पनि नेपालीको सहयोग थियो । तिब्बतबाट भागेर मुस्ताङ पुगेका कर्मापालाई २०५६ पुस १६ गते मनाङबाट हेलिकप्टरमा नगरकोट लगी त्यहाँबाट जिपमा राखेर रक्सौल हुँदै भारत प्रवेश गराइएको कर्मापाले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
यस प्रकारका गतिविधिलाई चीनले गम्भीर रूपमा लियो । चीनले नेपाललाई अवैध रूपमा तिब्बतबाट नेपाल प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरह्यो । सन् २००५ भन्दा अगाडि तिब्बतबाट अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या वार्षिक सरदर २ हजार थियो । यस्ता तिब्बती केही नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बसेर चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन् भने केही भारत जाने गरेका छन् । नेपालले सीमानाका कडाइ नगरेकाले त्यसरी अवैध रूपमा तिब्बती नेपाल प्रवेश चिनियाँ बुझाइ थियो । चीनले नेपाललाई सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न बारम्बार आग्रह गर्‍यो । नेपालको सशस्त्र प्रहरीको क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा सघाउन हात अगाडि बढायो ।
चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा चौकी स्थापनार्थ पूर्वाधार निर्माण गरेपछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्यामा कटौती भयो । चीन–नेपाल सम्बन्धमा अध्येताहरूका अनुसार सन् २००५ पछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीको संख्या २ सयमा झ‍र्‍यो । क्रमश: यो संख्या घट्दै अहिले वार्षिक सयभन्दा तल झरिसकेको छ । नेपालले सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै कडाइ गरी कुनै पनि तिब्बतीलाई अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिओस् भन्ने चीनको चाहना छ ।
चीनले नेपालसँग मात्र हैन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तिब्बतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै आएको छ । केही समय अगाडि अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’ ऐनले चीनमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चीनले कडा प्रतिवाद गरेको छ । अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टु तिब्बत एक्ट’लाई ‘तिब्बत यात्रा सम्बन्धी पारस्पारिक पहुँच’ पनि भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीतिक कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीले अमेरिकीलाई तिब्बत भ्रमणमा भिसा दिएनन् भने ती चिनियाँ अधिकारीलाई अमेरिकाको भिसा नदिने कानुनी प्रावधान यो ऐनमा छ । चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न चीनको भिसाले मात्र पुग्दैन । छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।
त्यसकारण चीनको भिसा लिएर भ्रमण गर्ने जोसुकैले स्वायत्त प्रदेश तिब्बत भ्रमण गर्न पाउँदैन । विभिन्न मुलुकले आफ्ना विशेष स्थानमा विशेष प्रकारका सुरक्षा समस्याका कारण यात्रा सीमित गराउने गरेका छन् । अमेरिकाकै सिलिकन भ्यालीमा सबै चिनियाँले प्रवेश पाउँदैनन् । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा आफ्नो कानुन बढी शक्तिशाली मान्दै प्रभुत्व लाद्न खोजेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप चीनले लगाएको छ ।
सन् २०१६ मा तिब्बत भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ३ लाख २१ हजार ९ सय पुगेको थियो भने सन् २०१७ मा ३ लाख ४३ हजार ५ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१८ मा ३ लाख ८१ हजार ४ सय विदेशी पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका छन् । अहिलेसम्म अमेरिकाबाट तिब्बत भ्रमण गर्नेको संख्या ९५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।
एकातिर चीनले तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खुला गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ यसको सुरक्षा संवेदनशीलतामा चीन अत्यन्त गम्भीर छ । तसर्थ एउटा असल छिमेकी मुलुकका नाताले नेपालले चीनको सुरक्षा चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । भूकम्प त कारक तत्त्वमात्र हो । तातोपानी नाका बन्दका पछाडि चीनका गुनासा धेरै छन् ।
लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ०८:२१
अरुणा थारू चौधरी
अपडेटः शुक्रबार, १६ जेठ, २०७७ । १२ : ४५ बजे